Accueil > Gazetin'ny nosy > Paositra malagasy : Misy varo-draikiraiky “arnaque”
Isan’ny mandefa entana toy ny taratasy ny Paositra Malagasy, amin’ilay sampan-draharaha “EMS”. Tetsy Tsaralalana “Petite vitesse” no nandehanan’ity renim-pianakaviana handefa entana ho an-janany mianatra any ivelany ny talata teo. 6 kilao ny entana halefa. Rehefa voaloa ny haban-tseranana (ladoany) dia niroso tamin’ny fandefasana ny entana. Nanambara ny mpandray tao fa tsy misy baoritra handefasana entana latsaky ny 10 Kilao fa ilay 15 Kilao no atao. Izany hoe tsy maintsy manefa ny saran-dalan’ilay entana milanja 15 kilao izany.
Hanky va re, hoy ity renim-pianakaviana, halatra sy varo-draikiraiky izany. Dia nandehanany tao amin’ny “Receveur chef” ka na ity farany aza zendana, ary tsy maintsy niteny ireo mpiara-miasa aminy eo ambany fiadidiany, mba hatao amin’ny laoniny sy ara-drariny ary ara-dalàna ny asa –tolotra (service) omen any mpanjifa fa mandoa vola izy ireny.
Tsy maintsy ambara ambony gazety ny tranga toa izao mba ho fanitsiana ny fahazaran-dratsin’ny olona sasany satria tsy maintsy efa nisy olona hafa tratran’izao “varo-draikiraiky” izao fa tsy afa-nanoatra.